Sahlashadii Cabdiqasin iyo damacii deerow
Ka dib markii Madaxwaynaha jamhuuriyada jabuuti mudane Ismail Omar geele uu ugu baaqay shir ay u dhanyihiin umada Somaaliyeed.
Shirkaas oo go'aanka uu u yaalay ummada soomaaliyeed go'goshana lahayd ummada reer jabuuti iyo Madaxwaynahooda.
Geedi socodkaas oo ayka qayb galeed dad kor u dhaafay 3000 oo naf iyo maalba u huray siday dalkooda ugu soo dabaali lahaayeen nabadgalyo ,iyo nidaamkii dowladnimo.
Si loohelo dowlad xeer adag leh iyo axdi adag oo xakamaysan.
Sidii dhidibada loogu aasi lahaa dhisme dowladnimo oo :-
-Ka duwan tii hore ee taagnaan kari wayday;
-Ku dhisan tiirar cafimaad qaba:
-Ka tarjumaya baahida dhabta ah iyo rabitaanka dadka intiisa badan ;
-Asaaskiisu yahay caddaalad,dimoqraadiyad iyo xurmada qofka oon lagu xad-gudbin;
-Sharcigu cid walba ka sarreeyo;
-Ka tallaalan xumihii soonmali kala geeyay
Iyada oo intaa gundhig looga dhigayo,Lagana ilaalinayo:-
-Ku xadgudubka awooda qaran
-Isu xoogsheegad iyoamar-ku-taaglayn
-Qabyaalad loo adeegsado siyaasad ka horjeeda danta guud
-Boobka hantida qaranka
-Been iyo munaafaqnimo aan laga xishoon
-Ku -tumashada qiyamkii subbanaa ee dhaqanka soomaaliyeed iyo diinta islaamka
Iyadoo laga gaashaamanayo cawaaqib xumadii soomartay somaliya lagana ilaalinayo inay mardanbe dib ugu noqoto ayaa waxaa Si sharaf ku dheehan tahay looga qayb galiyay shirka.
Iscafis iyo isku soo heloobid ka dib ,Ayaa halkaa lagu doontay oo ergadii wax garadka ahaa si buuxda codkooda ugu doorteen
Cabdala Derow isaq oo ku guulaystay codka dhan kana guulaystay musharaxiin tii kale.
Cabdla Deerow Isaq: 156 cod
Maxamed Rajis Maxamed: 22 cod
Cabdicasiis Mukhtar Macalin: 14 cod
Waxaa la guda galay doorashadii madax waynaha taas oo loo habeeyay inay u dhacdo si cadaalad ah ergooyinkana u ar kayeen inay tahay cadaaladu waxa kaliya ee soomaali maanta isku duubnideedii soo celin karta.
Waxaa madaxwaynaha dalka soomaaliya loo magacaabay Cabdiqasin Salad Xasan. cabdiqasin isaga oo u hambalyaynaya
baarlamanka soo maaliyeed ayuu yidhi "waa mahadsan yihiin intii i dooratay iyo intaan idooranba " isagoo si buuxda uga guulaystay musharaxiin tii kale ee la tartamaysay
Run ahaantii intii nasiibka u yeelatay inay ummadooda shirkaa usoo wakiisheen xilna u dhiibteen waxay fursad u haysteen:-
-Taariikh cusub horseed u noqdaan
-Wixii hore u qaloocday toosiyaan
-taariikhdana ku galaan kuwii soo celiyey sharaftii dalkooda.
Laakiin nasiib xumo ma dhicin inay ka faa'iidaystaan dadkoodana u faaiideyaan kuwii la doortay .
Iyagoo markiiba ku dhaqaaqay soo daabacaad lacago'false ah oo sixir barar ku riday shacabka dhiban,Iyagoo lunsaday deeqdii la siiyay umada dhiban ee soomaliyeed,Iyadoo uu dhacay xil isku jiidjiidad dhexdooda ah,Iyadoo ay burbur iyo ku tumasho ugu dhaqaaqay dastuurka iyo xeerarkii la dajiyay ee la isku raacay.
Taasi waxay abuurtay in ay ka niyad jabaan shacabkii taageerada buuxda siiyay,Ergadii iyo barlamankii doortay qoomameeyaan doorashaday doorteen nimanka ay xilka aysan qaadi karin dusha usaareen.
Cabdiqaasin oo markiiba rabay inuu calamka iyo umada soomaliyeed ku soo jiito oo uu taageero kaga helo ayuu u magacawday wasiirka koowaad Cali Khalif Galaydh isaga oo og in uusan xilka ku jiidjiidan doonin haduu yidhaahdo waa lagaa qaaday xilka madama uu yahay nin waxbartay aqoon buuxdana leh iyo sharaf intaba.
Kadib showrkii iyo shirqoolki ay dhigeen Cabdala deerow iyo madax waynihiisa cabdiqasin ay mu'aamarad u xuubsiibteen ,Kadib
markii ay fahmi waayeen ninkan wixiisu wax cadyihiin aan hooska tuurka iyo faralaabka ka fog.
Labadii xaqdaro ku heshiiya xaqay ku diriraan.
Cabdiqasin markii uu ka soo jeestay Cali Khalif Galaydh ayuu ula booca isugu tukubeen isaga iyo Deerow.
Cabdiqasin oo sidii Galaydh ee odayaysneed ee uu xilka iskaga wareejiyay isaga oo ka filaya taa mid lamida Deerow inuu sameeyo xilkana u dhiibto nin ka firfircoon oo dar dar cusub qaba .
Balse taasi ma dhicin oo Deerow waa aqbali waayay kamana dhiigaysan xilka loodhiibay ee uu mudada gaaban yahay ee sadexda sana kudhow isaga oo uba haysta inuu hayay sadex cisho.
Deerow isaga oo dhaga naban ayuu iskula siidaayay dhanka cabdiqaasin sanqadhiisu ka xigtay , cabdiqasina orod ayuu is xaabiyay isaga oo leh "war laxdu sow na cuntee "
� Ma'xal u Raadinbaa mise Abaalmarin la gudoonsiinayo [Darwiish]
Afeef: Aragtida qoraalka waxaa leh qoraaga ku saxiixan, kana tarjumi maayo aragtida SomaliTalk.com
Faafin: SomaliTalk.com | June 19, 2003